Izifundo zikaTata nguBeyoncé - Izinto Zobugcisa
Izifundo zikaTata nguBeyoncé
Le ngoma ifumana uBeyoncé ecula kuyise, u-Matthew Knowles. Ubalisa ngendlela awamfundisa ngayo ukomelela kwaye uhlala ezimela-emenza 'ijoni.'
Esi sibini sinobudlelwane obunzima. UMateyu Knowles wayengumphathi wexesha elide likaBeyonce ukusuka kwiintsuku zakhe zokuqala zamantombazana eTyme ngo-Destiny's Child kunye nomsebenzi wakhe wokuqala wedwa. Nangona kunjalo, emva kokumgxotha njengomphathi wakhe ngo-Matshi 2011, bahlukana. Ukwahlukana kwabo kwaqhutywa yinxalenye yokungathembeki kukaMateyu Knowles kumama kaBey. (U-Knowles wazala abantwana ababini ngaphandle komtshato wakhe kumama kaBeyoncé uTina Knowles-Lawson. Esi sibini saqhawula umtshato ngo-2011, emva kweminyaka engama-31 betshatile).
Ekupheleni kwendinyana yesibini, uBeyoncé ucula utata wakhe esifa. UMateyu Knowles uphila kakhulu kwaye mhlawumbi ubhekisa kuqhawulo mtshato lwabazali bakhe kunye nokwahlukana notata wakhe.
Olu lusuku lokuqala lukaBeyoncé ukungena kwilizwe kunye nomkhondo kuphela Ilemonade Apho kuphela komvelisi ophambili. UBeyoncé uyintombazana yaseHouston apho umculo welizwe ukhulu kwaye ngewayekhule ejikelezwe zizandi zaseNashville. Kuyathakazelisa ukuba asebenzise uhlobo lomculo akhule nawo ukuphinda avakalise ukungathembeki kukayise.
UBeyoncé ubhale le ngoma no:
Imvumi yase-Afrika-yaseMelika- umbhali weengoma uWynter Gordon, naye owabhala wenza ikopi 'Uxolo' kwaye unekhredithi yokubhala ' Sukuzenzakalisa . '
Umbhali weengoma zeR & B uKevin Cossom, obhale iingoma zezinto ezithandwa nguKeri Hilson ('Knock You Down'), uRick Ross ('Speedin' ') noRihanna (' Tsiba ').
UAlex Delicata owaziwa kakhulu ngokubhala kunye nokudlala isiginci kwiRihanna 'California King Bed.'
Uxelele uKevin Cossom Ibhilibhodi Le ngoma yabhalwa emva phaya ngo-2014. UWynter wayefuna ukwenza into kwasekuqaleni. Ndabiza umhlobo wam olungileyo, u-Alex Delicata, okwangumvelisi kunye nombhali. Wayidlala ikatala, wayibhala kwaye sasicinezela kakhulu irekhodi kwiLaptop kwaye sayicula phantsi - ukungqinelana, ukungqisha kunye nokuqhwaba izandla, kwaye yayiyeyona vibe. Mhlawumbi siyenzile amatyeli ambalwa de sayifumana. Sasisazi ukuba sinento. '
'UWynter wayefuna ukuya nayo eBey,' uqhubeke uCossom. 'Wayefuna ukuyigcina njenge-organic, elula ngokulula. Le meko ibiyiseshoni entle kakhulu kuthi sikhululekile, sivulekile kwaye sinemveliso kwaye singenakwenziwa kule nto sicinga ukuba unomathotholo uyikhangele. '
UCossom ucacisile umxholo wengoma: 'Xa ndiyenzileyo noWynter, ndimthembisile. Ngokucacileyo yayiyirekhodi yabasetyhini. Xa isiza kuloo nto, ndiyathanda ukumamela ngokokubona komfazi okanye indlela abavakalelwa ngayo. Andifuni ukuthatha ukhokelo njengendoda ke ngoko sasihamba ngendlela awayezingcangcazela ngayo kwaye zithini iimvakalelo zakhe.
Zintle kakhulu izifundo zikatata. Intombazana ekhule inzima. Utata wakhe wayenzima kuye, engafuni mntu oza kumxhaphaza. Ngokuqinisekileyo enye yezo meko. Isizobele umfanekiso welizwe ezingqondweni zethu. Kwavakala kunzima. Utata wam ke uthe dubula. Ubona iwhisky phezu kwetafile. Uyabona umpu. Kwakunoluvo nje kulo.
Khange ithathe into ye-hip-hop ukuyenza nzima, endicinga ukuba ipholile kakhulu ngakumbi kuBeyoncé. Kwaye kuhamba naye evela eTexas. I-vibe yakhe kuyo iyavakala ukuba yonke le nto yahlangana njani. '
Uxelele uWynter Gordon Ukuzonwabisa ngeveki ukuba yena kunye nababhali-kunye naye babhala oku ngokukodwa kuBeyoncé. 'Xa ndandimdlalela yona, ndandifana nokuthi,' Le yenye yeengoma endizithandayo, '' utshilo umbhali wengoma. Wayefana, 'Obu bubomi bam.' Ndamxelela, 'Uyazi yintoni, yithathe, wenze unothanda ngayo.' Uye wayokuphinda ayivelise, watshintsha amanye amagama, wongeza ibhulorho, yeyakhe.
'Khange athethe nam ngotata wakhe,' uqhubeke uGordon. Khange singene kwiinkcukacha. Ndibona ubudlelwane babo kumajelo eendaba njengaye wonke umntu. Ndijonge i-HBO ekhethekileyo njengaye wonke umntu. Xa usebenza ngokusondeleyo nomculi bachukumisa izinto kwaye wayichukumisa. UBeyoncé ebesemakhayeni ethu phantse iminyaka engama-20. Ndimthandile ukusukela oko wayekuMntwana weDestiny, ewe ndiyalazi ibali lakhe. '
U-Beyoncé ucule le ngoma nge-Dixie Chick kwi-2016 Country Music Association Awards ngo-Novemba 2, 2016 ekhatshwa yi-harmonica kunye neempondo. Ngethuba lokusebenza kwabo, i-quartet yatshintshela iChick '2002 engatshatanga' Ixesha elide lihambile. ' Kungekudala emva koko ingxelo yestudiyo yentsebenziswano yabo yakhutshwa.
Intsebenziswano akufuneki ibe yinto emangalisayo njengoko i-Dixie Chick yayigqume ingoma kukhenketho, kodwa amanye amashiya aphakanyiswa njengoko ilizwe lesithathu lisakhunjulwa ngabagxeki abathile impikiswano yezopolitiko bayikhokelele kukhokelele kuhlaselo olukhokelwa yi-US e-Iraq .
Ngaba ubambe i-Blue Ivy cameo ekupheleni kwengoma? Intombi kaBeyoncé iyakhwaza 'Umsebenzi olungileyo Bey!' kumama wakhe kule mizuzwana mihlanu idlulileyo.
IBlue Ivy Carter sele inerekhodi elinye njengomculi. Uyise uJay-Z ka-2012 'Uzuko' ongatshatanga ubeka ukukhala kwakhe kunye nee-coos, ezabhalwa xa wayeneminyaka engaphantsi kweentsuku ezimbini ubudala. Uluhlu njengomculi obonisiweyo, uBlue Ivy waba ngumculi omncinci kunabo bonke owake wabizwa ukuba abonakalise kwitshathi yeBillboard xa ingoma yaqala kwiingoma zeR & B / Hip-Hop kwi # 74.
Kanye negalelo lekatala kwi Ilemonade sika ' Sukuzenzakalisa , 'UJack White naye ungenise enye ingoma yale ngoma. Ukuthetha no Amatye agiqekayo , owayengumphathi we-White Stripes ngaphambili watyhila ukuba uBeyoncé ucele u-Blues welizwe u-'Daddy Lessons, 'kodwa ilungiselelo lika-White lahlala lingasetyenziswanga kwi-albhamu.
amazwi ezingalweni zengelosi
Inombolo yeengelosi ezingama-44
ukuba ukhe wakukhathaza uthando lwenene alunakushiya
iibheles ngoncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam
isayina indoda ezintlanu band band lyrics
Kwakungekho kum amazwi omculo